Yintoni esiyilindeleyo kwi-WWDC 2015 | Iindaba zeGajethi
UPablo Ortega | | iapile, I zi ganeko, ngokubanzi
Ukubala kuye kwaqala. Ngomvulo olandelayo, nge-8 kaJuni, iziko lendibano yeMoscone eSan Francisco iya kubamba umhlangano INkomfa yabaPhuhlisi beHlabathi ka-2015. Inkomfa yonyaka yonjiniyela, ehlelwe ngu iapile, kwaye yenye yezona zidumileyo kwihlabathi lobugcisa. Ukufumana itikiti leWWDC 2015 ngumsebenzi onzima: kuqala kufuneka ufake igama lakho kumzobo kwaye, ukuba ikhethiwe, uya kuba nakho ukuhlawula phantse i-1.600 yeedola ezibiza iindleko zokungena.
I-WWDC iye yaba sisiganeko esijolise ikakhulu kwisoftware. Kulo nyaka iApple izakubhengeza - iOS 9, yintoni entsha kwi-OS X, kodwa kuyakubakho isimanga kwamanye amacandelo. Ngokungafaniyo nolunye udidi, ngeli xesha ukuvuza kunqabile, kodwa sinokufumana umbono wokuba i-Apple ibikulungiselela ntoni kunyaka ophelileyo. Nantsi into sijonge phambili kwi-WWDC 2015 kwisebe ngalinye.
5 Ukusasazwa kweenkonzo zika-Apple kumabonwakude
Kunyaka ophelileyo iApple yazisa i-iOS 8, inkqubo yokusebenza ethathe inyathelo elibalulekileyo ekwenzeni izixhobo zethu zisebenze. Inkampani ekugqibeleni yasivumela ukuba sithenge iikhibhodi eziphuhliswe ngumntu wesithathu kwaye songeze okanye sisuse iiwijethi kumaziko ethu ezaziso. Ngale ndlela, iApple yaphefumlelwa yinkqubo ephambili yeembangi: i-Android. Kulo nyaka sinethemba lokuba Ukuvuleka kokwenza ubuqu kuyaqhubeka. Singafumana isimanga kumbutho wee icon okanye xa sisebenzisa ujongano, kodwa ukuza kuthi ga ngoku akukho zinkcukacha zivelisiweyo malunga noku.
Kwelinye icala, kwi-iOS 8 iApple yaqala ngo "IKhayaKit", isicelo esinqwenela ukuba liziko lekhaya lethu. Abaphuhlisi kunye nabavelisi bokufikelela banokusebenzisa i- "HomeKit" ukuxhobisa abasebenzisi. IKhayaKit yayiza kusivumela ukuba silawule ukuzenzekelayo kwasekhaya kwisicelo esinye: ukuphakamisa kunye nokunciphisa iimfama, jonga iikhamera zasekhaya, ucime izibane ucime, nokunye okuninzi. Ngaba Esinye sezixhobo ezilindeleke kakhulu ze-iOS 8, kodwa ngelishwa, iApple ayizange iyisebenzise. "IKhayaKit" ibilele ubuthongo obunzulu "ngaphakathi kwii-iPhones zethu kunyaka ophelileyo kwaye besingazi ukuba kutheni. Okokugqibela, i-iOS 9 iya kuthatha i-baton kwaye ibe yiyo Inkqubo yokusebenza esivumela ukuba silawule izinto zekhaya. Kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, iApple kunye neenkampani ezininzi zoncedo zibhengeze ukuba zikulungele ukumilisela iimveliso ezihambelana neKhayaKit. Elo xesha lifikile kwaye sinokulindela uninzi lwezimanga kule meko, hayi kwi-iOS 9 kuphela, kodwa kuya kubakho namanye amasebe aza kuxhaphaza amandla eKhayaKit, njengoko uza kubona kamva.
Obunye ubungqina esinabo, ngokuvuza ngokuthe ngqo kubasebenzi beApple, busikhokelela kwi usetyenziso olusemthethweni lweMaphu. Le yayiyenye yeengxaki ezinkulu ze-Apple kwi-iOS 6: iqonga, elazalelwa ukubuyisela iimephu zikaGoogle, alizange liphile ngokulindelweyo kwaye imvula yokugxekwa yayingenakuphepheka. UApple waba phantsi koxinzelelo kangangokuba uTim Cook wanyanzelwa ukuba atyikitye ileta eluntwini ecela uxolo ecebisa ezinye iindlela zokulwa. I-Apple Maps iphucule kakhulu kule minyaka idlulileyo, ibonelela ngeendlela ezithembekileyo, kodwa ayikabikho kwinqanaba leeMephu zikaGoogle. Ngeli xesha, i-Apple Maps ayisibonisi ukugcwala okanye zothutho loluntu, kodwa le ndawo yokugqibela inokutshintsha ukusuka kwi-iOS 9, ngelo xesha iApple iya kuqala ukwazisa ngolwazi ngezixeko ezikhulu ezinje ngeNew York, London, Berlin naseParis.
Kwelinye icala, ukuphuculwa kwesoftware kulindeleke ukuba kongezwe kwi-iPad. Ithebhulethi yeApple ihlupheke ngokuhla kwintengiso kunyaka ophelileyo kwaye akukho nto ikhangeleka ngathi iyakwazi ukuyeka. A Umahluko omkhulu kwi-iPhone 6 Plus ingasisisombululo. IOS 9 ingazisa ukwenziwa kwemisebenzi emininzi yokwenyani, apho sinokuvula kwaye silawule iiwindows ezimbini, kusetyenziswa ezimbini ezahlukeneyo, ngaxeshanye. Ayizukubi ukuba, ekugqibeleni, i-iOS 9 yaba yinkqubo yokusebenza esivumela ukuba siqale iiseshoni ezahlukeneyo kwi-iPad. Iya kuza ngokufanelekileyo kwiindawo zosapho nasemsebenzini (ukuba umsebenzisi ngamnye abe nolwazi lokufikelela, kunye negama eligqithisiweyo).
Kunyaka ophelileyo, ngoku, besisele sazi ukuba i-OS X izakubizwa ngokuba yiYosemite, njengepaki yesizwe yaseCalifornia. Kwiminyaka emibini edlulileyo uApple waqala ukusebenzisa amagama eendawo ezibalulekileyo kwindawo yegolide kwiinguqulelo ezintsha zenkqubo yokusebenza ye-Mac.Kule meko, kwaye kwiintsuku ezimbini emva komsitho, asikazi ukuba izakuba yintoni isiteketiso esikhethiweyo.
I-iOS 9 iya kuba yinkqubo yokusebenza egxile ekuphuculeni uzinzo, njengoko sifundile, kwaye i-OS X iya kulandela amanyathelo afanayo. Asazi ukuba zeziphi ezona ndaba ziphambili ze-OS ngeli xesha, nangona sinethemba lokuba sizakufumana inqanaba elithile lokudityaniswa neKhayaKit kunye nophuculo olufanayo olusetyenziswe kwinkqubo ye-Apple Maps. Le nguqulo intsha ye-OS X iza kuza ixhotyiswe nge ukuphuculwa kokuzimela kwe-MacBook, IMacBook Air kunye neMacBook Pro kwaye ngethemba lokuba iingxaki ezinxulunyaniswa nonxibelelwano lweWi-Fi, enye yemisebenzi elindelwe nguApple, iya kusonjululwa kube kanye.
Kwinkomfa yayo yokugqibela, iApple yehlise amaxabiso aqhelekileyo e-Apple TV ukusuka kuma-99 euros ukuya kwi-79 euros, eyadala amarhe malunga nesizukulwana esitsha. Inkqubo ye- Intsha ye-Apple TV iyakuba nobunzima bokuhlamba ubuso kude kube ngumhla. Ukongeza ekuhambeni kunye nezixhobo ezinamandla, iseti iya kuzisa uyilo olutsha, olucekeceke kunye nokukhanya (kubandakanya isilawuli), sikhatshwa zizinto ezahlukeneyo ezigqityiweyo: ezimhlophe, indawo engwevu negolide. Isilawuli sasiya kuphinda senziwe ngokutsha, kodwa siya kudibanisa amaqhosha afanayo kwaye songeze ipaneli yokuchukumisa.
Ngaphakathi kwale Apple TV intsha singafumana ivenkile yosetyenziso kunye nezinye iivenkile zemidlalo iyahambelana idlalwe. Kwelinye icala, iApple TV yayiza kudibanisa iSiri kwaye ibe liziko elifanelekileyo kwikhaya lethu. Iseti inokunxibelelana ne-iPhone yethu, ngendlela yokuba, xa sikude nekhaya, singacela i-iPhone ukuba icime okanye icime kwaye i-Apple TV ibe sisixhobo esilawula ukuthumela loo myalelo ngokuhambelana isincedisi.
Ekugqibeleni siza kubona ukuba njani ukufunyanwa kwee-Beats ezibonakalayo kunyaka ophelileyo, intengiselwano ebize iApple ezintathu zeedola. Sineemvavanyo ezininzi ezisikhokelela ekucingeni ukuba iApple inesicelo sayo somculo sokusasaza esilungeleyo esiza kukhuphisana ngqo nezinye izimbangi ezinkulu ezifana neSpotify. Ixabiso lokubhalisela liya kufana, nangona inkampani izamile ukuyinqumla, kodwa ayiphumelelanga ngenxa yezithintelo ezisemthethweni kwiinkampani ezirekhodayo.
Ngokungafaniyo neRadio yeTunes, I-Apple Music iya kusivumela ukuba simamele nakweyiphi na icwecwe igcisa eligqibeleleyo okanye elithile elifunayo. Ndiyathemba ukuba ukwandiswa kwamazwe aphesheya kuya kukhawuleza kunaleyo yeRadio iTunes, kuba inkonzo ayikafikeleli kuyo yonke imimandla iApple esebenza kuyo ngesiqhelo. I-Apple Music iya kudityaniswa kwi-iTunes, i-Apple TV, kunye ne-iOS, ewe.
Ukusasazwa kweenkonzo zika-Apple kumabonwakude
Siyazi ukuba iApple isebenza ekuphuhliseni eyayo inkonzo yokuhambisa umabonwakude, eya kuthi ivumele ukubukela imixholo yeendlela ezili-XNUMX ezinkulu zikamabonwakude e-United States ngexabiso elinokubakho $ 30 okanye $ 40 ngenyanga, zitshiphu kakhulu kunentambo kamabonakude eUnited States. Le nkonzo ivelisa ulindelo olukhulu, kodwa ngelishwa iApple khange ikwazi ukuyilungiselela le WWDC 2015, kungathatha ixesha elincinci ukuyibona.
Asithandabuzi ukuba iApple izakuvula inkomfa yayo ngoMvulo Ukuqhayisa ngokuthengisa kweApple. Intetho ephambili kulindeleke ukuba ikhokelwe yividiyo ebonisa ukonwaba kwesixhobo sokuqala sika-Apple esivelileyo kwihlabathi liphela. Silindele ukuba iApple yazise nUphuhliso lwenqanaba lesoftware, ikwanxulumene neKhayaKit kwaye, ewe, ujongano olutsha lubonakala lukhetha xa kuboniswa ixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I zi ganeko » Yintoni esiyilindeleyo kwi-WWDC 2015
Uyikhubaza njani iMeko eKhuselekileyo kwiWindows